एउटा मात्रै सवारी किनेर पनि कानुनी रुपमा चलाउन पाउने-यस्तो छ दर्ता प्रक्रिया !
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ द्वारा यातायात व्यावसायको क्षेत्रमा व्याप्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कडा कदम चालिए सँगै अब देखी सर्बजानिक सवारी साधन सञ्चालनको व्यवसाय गर्दा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
कम्पनि दर्ता भएपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९३ ले व्यवस्था गरेअनुसार सार्वजनिक यातायात पञ्जीकरण पनि गर्नुपर्छ । यस अघि सार्वजनिक यातायातको व्यवसाय गर्न चाहनेहरुले यातायात समतिको मातहतमा मात्रै सवारी चलाउँदै आएका थिए भने अब जो कोहिले एउटा मात्रै सवारी किनेर पनि कानुनी रुपमा चलाउन पाउने भएका छन् ।
प्रक्रिया छोटकरीमा :
कम्पनि कसरी दर्ता गर्ने ?
दर्ता गर्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको वेबसाइट www.ocr.gov.np मा जानुपर्छ र “ReserveaCompany Name” लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्छ ।
“To establishanew company” लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरि आफ्नो इमेल राख्नुपर्छ र इमेलमा आएको पासवर्ड प्रयोग गरि लग इन गर्नुपर्छ र नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्छ । यो लिंकमा कसरी अनाइनबाट कम्पनि दर्ता गर्ने भनेर जानकारी राखिएको छ ।
तपाईंले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली पत्र बनाउनु पर्छ अनि इमेल र पासवर्ड प्रयोग गरि लग-इन गरेर प्रबन्धपत्र र नियमावली पत्र अपलोड गर्नुपर्छ ।
अनलाइनको काम सकिए पछि दुई प्रति प्रबन्धपत्र र नियमावली अनि सबै सञ्चालकको नागरिकताको फोटोकपी लिएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तपाईं आँफै जानुपर्छ ।
कम्पनि दर्ताको काम पुरा भए पछि सवारी पञ्जीकरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा जानुपर्छ ।
एक करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि १६ हजार र त्योभन्दा बढी भएमा प्रति-करोड ३ हजार थप रकमका दरले राजस्व बुझाउनु पर्छ ।
सवारी पञ्जीकरण कसरी गर्ने ?
यातायात व्यवस्था विभागमा गएर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९३ अनुसार सार्वजनिक सवारी पञ्जीकरण गर्न सकिन्छ ।
पञ्जीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजात :
यातायात सेवा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, यातायात सेवाको प्रबन्धपत्र र नियमावली
प्रोप्राइटर, साझेदार वा प्रथम सञ्चालकहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र
सञ्चालन गर्न खोजेको यातायात सेवाअन्तर्गत रहेको सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र,सवारी कर तिरेको निस्सा,जाँचपास र तेस्रो पक्ष विमा
यातायात सेवा यसअघि अन्य कुनै नामबाट सञ्चालन भएको भए त्यसको दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर प्रमाणपत्र (PAN) र कर बुझाएको प्रमाण
यातायात सेवाअन्तर्गत काम गर्ने चालक वा परिचालकलाई दिइएको नियमावलीको अनुसूची ६२ बमोजिमको नियुक्तिको प्रतिलिपि र कमर्चारीको विवरण
सेवा पञ्जीकृत गर्दा तोकिएबमोजिमको राजस्व दस्तुर बुझाएको रसिद
कार्यालय रहेको घरजग्गाको लालपुर्जा वा भाडामा लिएको भए सोको सम्झौता
महत्वपूर्ण कुरा :
अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेका सवारीसाधनको भाडाको सम्झौता वा करारनामा गरिएका सवारीसाधन भएको अवस्थामा पञ्जीकृत हुनेछैन ।
एकपटक सेवा पञ्जीकृत भइसकेको कम्पनीमा थप सवारी पञ्जीकृत गर्दा लाग्ने शुल्क पुनः बुझाउनुपर्नेछ ।
कहाँ सम्पर्क गर्ने ?
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
फोन : ०१ - ४२५९९४८, ४२६३०८९,
४२१५०७७, ४२६१८२१, ४२६७२५६,
यातायात व्यवस्था बिभाग
बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल
फोन : ०१ - ४४७४९२१
कम्पनी ऐन अनुसार, कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न...
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले कम्पनी...
कम्पनीको हिसाब किताब र लेखा सम्बन्धी नियम र...
कम्पनीको हिसाव किताव र लेखा (दफा १०८...
कम्पनीको साधारण सभा सम्बन्धी प्रावधान
साधारण सभा : कम्पनीहरुको साधारण सभा दुइ प्रकारका...
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा पालाना गर्नुपर्ने...
१. कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको परिभाषा : (क)...